phoosarshinn's Page - Myanmar Network
စလုံးမှာ ရထား(SMRT) စီးရင်း ကံစမ်းကြရအောင်
Started this discussion. Last reply by lily Flower Jul 19, 2012. 1 Reply 1 Like
စလုံးမှာ ရထား(SMRT) စီးရင်း ကံစမ်းကြရအောင် စလုံးလို့ ခေါ်တဲ့ စင်္ကာပူမှာ နေထိုင်တဲ့ အစ်ကို အမများအတွက် သတင်းကောင်းလေးတစ်ခု လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါတယ်။ E Z link card ရှိ့သူတိုင်း မည်သူမဆို ပါဝင်…Continue
Started this discussion. Last reply by lethiri shwe Jul 1, 2012.3Replies 12 Likes
“ ညဏ်လင်းထက်.......” ရှေ့ကို ထွက်ခဲ့စမ်း ဆိုတဲ့ ဆရာမ စကားသံ အဆုံးမှာ ကျနော်ဟာ မ၀ံ့မရဲ တုန်ရီစွာနဲ့ အတန်းရှေ့ကို ထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။ ပုံနှိပ်စာအုပ်ဖိုး နဲ့ ကျောင်းက အလှူအတွက် နင့်ဆီက ငွေမရလို့…Continue
Sleeping pills အိပ်ဆေး
ကျွန်မ အမျိုးသား ညည အိပ်လို့ မပျော်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ သူက အိပ်ချင်ပေမယ့် အိပ်လို့ မပျော်နိုင်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ သူ့အလုပ်က ညဘက်မှဆိုတော့ သူက အိမ်ကို အမြဲ ညတစ်နာရီ ခွဲလောက်မှ ပြန်ရောက်ပါတယ်။…Continue
တောထဲမှာ ငှက်ရှိရင် ငှက်ဖျားမရှိဘူး၊ လူနေများရင် ငှက်ဖျားမရှိဘူးဆိုတာ ဟုတ်လား။ ဘယ်ချိန်ကိုက်တဲ့ ခြင်က ငှက်ဖျား ဖြစ်လဲ? မိတ်ဆွေတဦး ရှိဘူးတယ်။ အိန္ဒိယသွေးပါတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားမို့ စကားလုံးတိုင်း…Continue
Pink Ribbon From Phyo Wai Htoo Red Ribbon From Htet Win Khant Yellow Ribbon From THET NAING Limecat From rkarwaiyan
At 22:15 on March 23, 2017, thihaphokyat said…
At 13:19 on July 2, 2015,
At 9:38 on January 13, 2015,
At 9:01 on June 3, 2014,
At 9:29 on March 1, 2014, Hnin said…
Welcome back, friend. Nice song btw :)
At 1:05 on January 2, 2014, Hnin said…
At 13:04 on June 2, 2013, winechit said…
At 1:50 on November 26, 2011, naingaye said…
awww is it you........I see phoosershin web in my mail
At 22:34 on October 29, 2011, အလင်းရောင် said…
At 10:32 on October 17, 2011, aye nyein win said…
Mingalar par fri,